Travel » တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အန္တရာယ်အရှိဆုံး ကောင်းကင်လျှောက်လမ်း (၆) ခု	4
Posted by သျှားသက်မာန် on Nov 3, 2016 in Travel |4comments
Thint Aye Yeik says: အဲ့လျှောက်လမ်းတွေပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတို့ ဘာတို့ ကြားဖူးလား။
သျှားသက်မာန် says: တခါမှတော့မကြားဖူးပါ….
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: အပေါ်ဆုံးက HuaShan တောင်တန်း ၊ Shaanxi ပြည်နယ်ဆိုတာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးထင်တယ်..ကျုပ်ဆိုတော့
သျှားသက်မာန် says: တကယ်သွားရင်. အဲလောက်ကြောက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး